Maqaal: Yaa Qaswade ah?!
Milano Isniin 7 May 2012 SMC
Jahawareerka lagu jiro, galiddiisa waxaa sababay arrimo is biirsaday, ay ugu horrayso kalitalin qabiil huwan, oo xorriyad iyo xarago midna diidday, labaatan sano ka dib, maxaan haynnaa oo horumar ah, dhan walba? Maxaan faa’iido ah oon gaarnayn? Maxaan ku tallaabsannay oo wanaag ah? Maxaa ...... Maxaa...... Weydiimuhu badan, balse, waxaan filaa inaan dhammaan jawaab qumman iyo qiilin midna loo hayan, maanta waxaan ku nool nahay ayaantii ugu xumayd, waa aragtidayda gaarka ah, qof walba middiisu gaar ayey u tahay.
Wax la meero oo gidaarrado la wareego, wax la lafaysto oo la luufluufo, Mahiga ayaa mar qura farta ku fiiqay madaxtooyada, sheegayna inay afgambiyeen rag uu ku sheegay Aala Sheekh, malaha markaa Sheekh Shariif uma dan lahayn, waa ku Awrkacsanayey, ee wuxuu u jeeday siduu u weerari lahaa Formaajo, miday tahayba, wuxuu ahaa dawan dhiillo xambaarsanaa, dhan kastoo loo macneeyo, haddana lama garan, oo waxaa lagu ekaaday Mahiga inuusan diinta wax u dhimin, la yaab, oo sawka barqo cad Salaadda Janaasada wax ka dukadday, oo maxaa loo lahaa diinta yuusan wax ka sheegin? Aaway wadaadadii diin dacareedkanagu dirqin jiray, sanadhihii jadbada Jihaadka? Maya xaggee bay ka bexeen Sheekh Dhicisoow iyo raggisii shalay Mahiga ku dhaleecaynayey inuu diin u gafay? oo Markuu Salaadayey uma gafin? Aniga iima bixin, aqriste adna?
Waxaa dhawr cisho ka hor soo baxay warsaxaafadeed ay ku midaysnaayeen Urur Goboleedka “IGAD” Ururka Midawga Afrika “UA” iyo Qaramada Midoobay “UN” ujeedka bayaanku wuxuu ahaa in la caddeeyo in cagajuglayntii hore isu badalayso ciqaab! Waxaana lagu xusay in –waxa ay ugu yeereen- “QASWADE”yaasha, laga qaadi doono tallaabo ku qumman!
Inta aanan weydiin dhigin, una daadegin wercelinteeda, aan duljoogsado eray kale oo asna soo noqnoqday mudadan dambe, waa eraga “ISBAARAYSTE” qof walba oo kaa aragti duwan ayaad u adeegsan kartaa, waxaa eragaa lagu suntay dadkii duray dastuurka qabyo qoraalka ah, ee yiri waxaa ku jira qodob qaldan ama qalloocan, intii la dhagaysan lahaa, ee laga qancin lahaa, waxaa loogu badalay Dastuurka ayaa ISBAARO loo dhiganayaa, eragaa xilkiisa waxaa qaaday mudane Gaas, safka dambe waxaa ka soo galay ee si kalana u dhahay Shariif, oo yiri dastuurka waa diidnay lama aqbalayo! Oo haddaa ma xoog ayaad ku ansixin?.
Aqriste, “QASWADE” ma la dhihi karaa, mudanihii ay xilka ka qaadeen intii u dooratay xilkaa in ka badan? haddana laga fujin waayey, isagu garaadkiisa kuma tagayo, garabna waa haystaa, waa “Gardarro garab og lagama guulaysto” garabka wuxuu ka helayaa canaasir ka tirsan madaxda sare ee dawladda, oo iyagu raalli uga ah inuu sii hayo xilkaa iyo shisheeye uu waligiiba u ahaakabaqaade, illeen hadduusan kalkaale u ahayn iyaba ma garab siiyeene.
Ugu dambayn, waxaa marag ma doonta ah, in wadanka ay ka buuxaan “QASWADE”yaal badan, oo qaab walba leh, isugu jira qaybaha bulshada oo dhan, waliba kuwooda idhuhu qabtaan, aan magac dhabo, waa Odayada, Wadaadada iyo Siyaasiga, haddana waa mid aan la aqbali karin, in qofkii qalad tilmaama ama qalloocan jirta sheega in lagu qaabiyo waa “QASWADE”.
Waxaaba ka sii daran inay noqonayso jid furmay, xilligii Siyaad Barre, ninkii loo bogi waayo waxaa lagu sunti jiray “KACAAN DIID”, sooyaalka sii raac, sabankii Ina Cabdille xasanna qofkii laga heli waayo waxaa lagu oran jiray waa “XUJOWDAY” bala aqriste, erayada “WAA XUJOWDAY, KACAAN DIID iyo QASWADE” maxay ku kal duwan yihiin? iima muuqato isdhaaf ay kala jeedaan, erayo ahaan iyo macno ahaan haa, balse, ujeedka iyo gundhigga ayaa isku mid ah, oo ah qofkii aan kuu sacbin inaad sumaddo.